Sunta Dabaqalooca oo noqotay maado lagu daweeyo cuduro badan oo halis ah sida Kansarka… – Hagaag.com
Sunta Dabaqalooca oo noqotay maado lagu daweeyo cuduro badan oo halis ah sida Kansarka…
Posted on 4 Maarso 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Maxay sunta ama mariidka dabaqalooca u noqotay wax loo baahan yahay dhinaca cilmi baarista caafimaadka? Sunta Dabaqalooca ayaa ah mid loo dhiman karo mararka qaar, laakin waxa ay noqon kartaa dawo abuurta dakhliga malaayiin dollar isla markaana ay badbaadiso kumanaan bukaan ah.
Dabaqalooca Falastiin ee jaalaha ama huruudka ah (The Palestinian yellow Scorpion) ayaa ah (Deathstalker), wuxuuna ka mid yahay noocyada ugu khatarta badan ee Dabaqalooca inta ku nool dunida, laakin suntiisa halista ah ayaa noqotay dhinaca kale dareeraha ugu qaalisan adduunka, dhibic ka mid ah suntaasi oo la eg xabad sonkor ah ayaa la siistaa 130 dollar, hal gallon oo sunta Dabaqalooca ayaa la siistaa 39 million dollar, sida ay qortay majalada “Business Insider”.
Si kastaba ha ahaatee, waa adag tahay sida aad ku heshid dareerahaasi, haddii aad u baahatid in gallon suntaasi ah heshid waxaa ubaahaneysaa 2.64 milyuun Dabaqalooc oo aad ka shubtid sunta, sidaasi darteed ayuu noqday maado ama walxo dhif ah.
Maadada Chlorotoxin ee ku jirta suntaasi ayaa leh faa’ido caafimaad, waxaa loo isticmaalaa daweynta cuduka kansarka maskaxda iyo xangulada, waxaa kaloo loo isticmaalaa sida baarayaashu sheegeen baabi’inta cudurka duumada Malaria ee laga qaado kaneecada, sidoo kale waxaa loo isticmaalaa cudurada lafaha ee keena jiirka, taasi ayaa ka dhigtay maado loo baahan yahay oo cilmi baarayaasha isku dayayaan in ay helaan si ay ugu isticmaalaan cilmi baaris caafimaad.
Daaweynta burooyinka kansarka leh
Daaweynta kansarka ee sunta Dabaqalooca ayaa noqotay arrin ku faafta dunida caafimaadka, sida shirkada “Blaze Bioscience” ee technologiyada Seattle ayaa 5 million dollar u diyaariyey midabeynta burada (Tumor Paint) oo ku howlan tirtirida burooyinka kansarka, sida laga soo xigtay website-ka (GeekWire).
Fikradda midabaynta burada ayaa soo bandhigeysa burooyinka kansarka haya, gaar ahaan carruurta, sunta Dabaqalooca ayaa lagu xiriiriyey in ay wax ka qabato unugyada kansarka hayo iyadoo aan wax dhib ah u gudbin unugyada aan cudurka heynin.
Majalada “Business Insider” ayaa xustay cilmi-baarayaal Moroccan ah oo soo hindisay qalab lagu dhaamin karo sunta Dabaqalooca, tijaabada ayaa guuleysatay sida loo soo saaro sunta Dabaqalooca markiiba waxaa la dhaamin karaa afar Dabaqalooc, Saynisyahanada ayaa rajeynaya in la faafiyo qalabkan si suuq geyn caalami loogu sameeyo si uu u fududeeyo soo saarida sunta si sahlan oo ammaan badan.